Kooxda tifaftirka ee Creativos Online | Abuurista khadka tooska ah
Abuurista khadka tooska ah waa bulsho weyn dhammaan kuwa jecel naqshadeynta garaafka, naqshadeynta websaydhka iyo horumarka iyo hal-abuurka guud ahaan, waa meel aad kula wadaagi karto xiisahaaga aduunkan xiisaha leh dadka kula nool isla raaxadaada.
Si loo horumariyo waxyaabahayaga, Creativos Online waxay leedahay a kooxda guriga dhexdeeda tafaftirayaal khabiir ku ah naqshadeynta iyo horumarinta, oo leh dhowr sano oo waayo-aragnimo ah oo ka shaqeynaya shirkadaha iyo qaabeynta iyo hay'adaha horumarinta iyo shaqooyinka had iyo jeer lala xiriiriyo adduunka hal-abuurka. Thanks to waayo-aragnimadan, boggayagu wuxuu u taagan yahay mid ka mid ah kuwa ugu tayada sareeya oo leh faahfaahin dheeraad ah oo adag dhammaan kuwa ka kooban nidaamka deegaanka ee degellada gaarka loo leeyahay ee loogu talagalay naqshadeeyayaasha iyo hal-abuurka. Haddii aad rabto inaad eegto dhammaan mawduucyada aan wax ka qabanno ee shabakadda, si fudud ayaad u samayn kartaa galaya qaybteenna qaybta.
At Creativos Online waxaan si joogto ah ugu koraynaa raadinta xirfadlayaal si ay nooga caawiyaan kobcinta bulshadan annagoo soo saarayna tayada iyo waxyaabaha xiisaha leh. Haddii aad rabto inaad ka mid noqoto kooxdayada qorayaasha waa inaad kaliya buuxisaa foomka soo socda waana kula soo xiriiri doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
Qoraa ahaan iyo tifaftire ahaan, naqshadayntu waxay qayb ka tahay aqoontayda, maadaama ay muhiim tahay in shaqooyinku muuqaal ahaan qurux badan yihiin. Waxaan jeclahay inaan la wadaago aqoonta aan ku leeyahay xayeysiinta iyo naqshadeynta kuwa kale ee laga yaabo inay u baahdaan.
Aniga ahaan, naqshadeynta garaafku had iyo jeer waxay ahayd aalad aan ugu tarjumi karo fikradahaaga xaqiiqda oo kor u qaadi lahayd. Sababtaas awgeed, waxaan ku bartay naqshadeynta garaafka Escuela de Arte Superior de Diseño (EASD) ee Castellón de la Plana, waxaanan hadda ka shaqeynayaa waxa aan ugu jeclahay: fulinta mashaariicda la xiriira sawir qaadista iyo naqshadeynta garaafka. Ma rabtaa inaad barato sida loo horumariyo mashaariicdaada? Markaa ha joojin akhrinta maqaalladayda.
Waxaan bartay Naqshadeynta Sawirka iyo Xayeysiiska, Waxaan isku cadeeynayaa inaan ahay taageere boodhadhka filimada, naqshadaynta qoraallada, iyo majaajilada; Waxaan jeclahay sawirka iyo isticmaalka ka samaysan farta qoraalka.
Xamaasad badan oo ku saabsan sawirka leh qaabkeyga gaarka ah, waxaan ahay Sawirqaade leh daraasado lagu tababaray ESDIP oo leh dibloomada guud ee saddexda sano ah ee Kartoonada, Kartoonada iyo Animation-ka. U oggolow in mala-awaalkaygu duulo oo aan helo natiijada aan rajeynayo waa wax aan jeclahay. Runtii waan ku raaxaystaa naqshadaynta, iyo xitaa intaa ka sii badan haddii aan la wadaagi karo.
Xamaasad badan oo ku saabsan farshaxanka iyo hal-abuurka, waxaan ahay naqshadeeye qasab ah oo ka helaa sameynta soo-jeedin iyo iskudayo xalal cusub oo adduunka ah ee naqshadeynta hal-abuurka ah. Sababtaas awgeed, waxaan jeclahay inaan maqlo fikradaha iyo soo-jeedinta dadka kale, iyo inaan ku dhiirrigeliyo faahfaahinta faa'iido u yeelan kara abuuritaanka naqshadayda.
Magacaygu waa Pablo Villalba waxaan ahay 31 jir waxaan ahay naqshadeeye / farshaxan. Xamaasad badan oo xagga farshaxanka iyo naqshadaynta ah, ayaan waxbarashadayda ka bilaabay dunida fanka dhawr sano ka hor Dugsiga Farshaxanka ee Pancho Lasso, halkan ayay ahayd markii aan ku ogaaday hamidayda dhabta ah ee qaybtan. Waxaan sii watay waxbarashadaydii Jaamacada La Laguna halkaas oo aan ku bartay Degree Design. Waxaan hadda baranayaa shahaadada mastarka ee naqshadeynta iyo ikhtiraaca waaxda dalxiiska. Xamaasad, xasillooni la'aan, hal abuur leh oo raba inaan ka helo dhammaan fikradahaas maskaxda ku soo dhaca madaxayga.
Waxaan ahay Soo saare Maqal iyo Muuqaal leh waayo aragnimo sanado badan ahna aan kahelay qaybta iyo in kabadan 50 mashruuc oo lagu fuliyay natiijooyin wanaagsan. Waan jeclahay inaan la wadaago khibradeyda si aan dhamaanteen wax u wada baran karno, maxaa yeelay waan ku raaxeystaa naqshadeynta garaafka waana sii sameeyaa xitaa marka ay kuwa kale jeclaadaan waxa aan sameeyo sidoo kale. Noqo Hal abuur!
Anigu waxaan ahay naqshadeeye websaydh iyo naqshadeeye naqshadeynta, sidaa darteed naqshadeynta garaafku waa qayb ka mid ah cidda aan ahay. Ku raaxaysashadiisu waa shaqadayda, aad iyo aad u badan si aanan uga labalabayn daqiiqad si aan u soo bandhigo mashaariicdayda si ciddii doontaba, ay ila wax u bartaan.
Ardayga Xiriirka iyo Xiriirka Caalamiga ah. Intii aan shahaadada ku guda jiray, waxaan xiiseynayay isgaarsiinta muuqaalka iyo naqshadeynta garaafka. Ogaanshaha aaladaha ugu muhiimsan ee naqshadeynta waxay iga caawisay inaan ka faa'iideysto hal-abuurnimadayda oo aan naftayda u muujiyo.Waxaan rajeynayaa inaan kula wadaago bartan qaar ka mid ah wixii aan soo bartay sannadihii la soo dhaafay!
Anigu waxaan ahay takhasus gaar ah waxaanan jeclahay Naqshadeynta Sawirka. Waxaan aad u xiiseeyaa farshaxanka, sawirka iyo dunida maqalka. Riyada, abuurka iyo aragida mashruuc kastaa oo isbeddelayaa waa wax aan aad ujeclahay oo iga buuxiya isla weynaan. Haddii dhibaato timaado, marwalba waxaan raadiyaa xalka si qaabka ugu dambeeya u noqdo mid hagaagsan.
Waxa aan bilaabay in aan xirfad ku barto Nakhshad garaafeed, sidaa awgeed waxa aan go'aansaday in aan si rasmi ah u sameeyo aniga oo gelaya shahaadada Nakhshadeynta ee Dugsiga Sare ee Nakhshadda ee Murcia. Tan iyo markii aan xasuusan karo wax kasta oo la xiriira adduunka farshaxanka, hal-abuurka iyo naqshadeynta ayaa soo jiitay dareenkayga. Had iyo jeer waxaan ahaa mid xiiseeya oo u heellan inaan barto farsamooyin cusub, barnaamijyo iyo duruus.
Waan jeclahay naqshadeynta garaafka, gaar ahaan glyph iyo naqshadeynta astaamaha, iyo sidoo kale inaan la jaanqaado barnaamijyada tafatirka waqtiga firaaqada. Aniga oo is-baray, waxaan maalin kasta baaraa siyaabo cusub oo aan u fuliyo mashaariic, iyo hagaajinta kuwii aan horey u qabtay, wax walbana waxaan ku sameeyaa anigoo adeegsanaya softiweer bilaash ah, maxaa yeelay waxaa jira barnaamijyo badan oo adeegsi bilaash ah oo aan ku abuuro naqshado aan caadi aheyn.
Anigu waxaan ahay Naqshadeeye Sawireed, Sawire iyo Tababaraha Shaqada, aad u xiiseeya Naqshadeynta iyo Farshaxanka Muuqaalka iyo codsiyadeeda qeybaha kale sida Naqshadeynta Bulshada, Xayeysiinta, ama xaalad dhaqan ahaan si buuxda u jirta. Waxaan jecelahay inaan adduunka naqshadda u soo dhowaado dadweynaha guud, soo bandhigidda naqshadeeyayaasha avant-garde iyo sawir qaadayaasha waqtiga oo dhan.
Naqshadeeye naqshadeeye kuna qalinjabiyey Juqraafiga. Waxaan u tababbaray sidii naqshadeeye qaabdhismeed aniga oo dhammaystiraya shahaado sare oo naqshadeynta iyo tifaftirka daabacaadda iyo daabacaadda warbaahin badan leh ee Salesianos de Sarriá (Barcelona). Waxaan aaminsanahay in tababarkaygii aaggan uusan dhamaan, sidaa darteed aniga kaligey ayaan ku tababbaraa anigoo qaata koorsooyin internetka ah iyo aqoon isweydaarsiyo fool ka fool ah. Waa muhiim in maalin walba la tababaro maxaa yeelay waxaan ku noolnahay adduun isbeddel joogto ah halkaasoo tiknoolajiyada ay ku kobcayso boodboodyo iyo soohdin. Naqshadaynta ka sokow, waxaan jeclahay sawir qaadista iyo tusaalaynta 3D si aan u helo jaangooyooyin sawir qaadis ah, oo ah aag aan ugu talo galay barashada kaligay.
Waxaan ku takhasusay sawir qaadista, fiidiyaha iyo tafatirka animation. Waxaan sidoo kale xiiseynayaa shaqada naqshadeynta garaafka, iyo sidoo kale jiilka waxyaabaha ku jira garaafka iyo maqalka, sidoo kale waxaan u isticmaalaa Adobe Audition inaan ku saxo muusikada, codadka iyo codadka. Waxaan jeclahay inaan la shaqeeyo, cusbooneysiiyo oo aan cusbooneysiiyo, taasi waa sababta aan marwalba uga warqabo horumarada ugu dambeeyay ee ka dhasha Naqshadeynta Sawirka.
Anigu waxaan ahay Naqshadeeye Sawir gacmeed, oo xamaasad gaar ah u leh xirfadeyda, qaabeynta, maareynta midabka iyo dhamaan fursadaha kala duwan ee aan ku abuuri karo barnaamijyo kala duwan. Khibradeyda waxaan ka soo shaqeeyey laga bilaabo daabacayaasha ilaa wakaaladaha xayeysiinta, oo ay la socdaan sawir qaadayaasha, isku duwayaasha suuq geynta iyo adeegga tooska ah ee macaamiisha, iyadoo qeyb firfircoon ka ah hal abuurka iyo wax soo saarka. Xirfad ahaan ahaan, waxaan sii wadaa balaarinta aqoonteyda iyo waaya-aragnimadayda, waxaan diirada saaray heer sarre iyo qanacsanaanta macaamiisha.